Land for Sale in Mayangone - Yangon Region | iMyanmarHouse.com
Lands for Sale in Mayangone
Ad Number S-8430720
အင္ၾကင္း အိမ္ျခံေျမအက်ဳိးေဆာင္ Close
ပတ်ဝန်းကျင်သန့်ပြီး ပိုင်ဆိုင်မှုခိုင်မာ၍ မြေကျယ် ဈေးတန် အရောင်း
၅၅'×၁၂၀' ဂရန်အမည်ပေါက် သိန်း ၄၈၀၀ ( ညှိနှိုင်း )...
Ad Number S-8417849
သိဒ္ဓိမင်း (အိမ် ခြံ မြေ ဝန်ဆောင်မှု)ကုမ္ပဏီလီမိတက် Close
မင်းဓမ္မအိမ်ရာဝင်း၊ မရမ်းကုန်း မြေကွက်ရောင်းမည်
မင်းဓမ္မအိမ်ရာဝင်း၊ မရမ်းကုန်း မြေအကျယ် - 60'×100' မြေသီး...
Ad Number S-8417165
7မိုင္​၊ ကုန္​းျမင္​့ရိပ္​သာ၊ 40'x50'၊ ​ေျမ၊ ဘိုးဘြား၊ ​ေရာင္​းရန္​႐ွိပါသည္​။
မရမ္​းကုန္​းၿမိဳ႕နယ္​၊ 7မိုင္​၊ ကုန္​းျမင္​့ရိပ္​သာ၊ သံလြင္​သစ္​ခ...
Ad Number S-8416133
Ad Number S-8390677
ပါရမီရိပ်သာ လမ်းမကျယ်ဂုတ် နေရာကောင်းမြေကွက် အထူးလျော့စျေးဖြင့်အမြန်ရောင်းမည်
09979599266 , 09442253428 , 09779777384, 09779777385, 09779777386
Ad Number S-8377685
NAY YAR THIT Real Estate Agency Close
(80'X80')အကျယ် ၊ မရမ်းကုန်း၊ ကမ္ဘာ​အေးဘုရားလမ်းသွယ်ရှိ ​မြေကွက်​ရောင်းရန်ရှိ
09-252588442 / 09-420033330
Ad Number S-8443878
(118'x100')အကျယ်, မရမ်းကုန်း၊ ရန်ကုန်-အင်းစိန်လမ်းပေါ်၊ နေရာကောင်း မြေကွက်အရောင်း
Ad Number S-8443129
(75'x130')အကျယ်, မရမ်းကုန်း၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းမပေါ်၊ နေရာကောင်း မြေကွက်ရောင်းရန်ရှိ
47,850 Lakh (Kyats)
Ad Number S-8442073
(75'x100')အကျယ်၊ ပြည်လမ်းမပေါ်၊ မရမ်းကုန်း၊ နေရာကောင်း မြေကွက်ရောင်းရန်ရှိ
Ad Number S-8441866
(82'x82')အကျယ်, မရမ်းကုန်း, ပါရမီ Villa, (​​ေ မာင္ဝိတ္အိ္မ္ရာ ) ​​ေ ျမကြက္ ​ေ ရာင္းရန္ ရှှှှှွိ
Ad Number S-8441784
(0.191ဧက)အကျယ်၊ မရမ်းကုန်း၊ ၈မိုင်ခွဲ၊ ပြည်လမ်းမပေါ်၊ မြေကွက်ကျယ် ရောင်းရန်ရှိ
36,000 Lakh (Kyats)
Ad Number S-8437393
Ad Number S-8435339
၉မိုင် မစိုးရိမ်လမ်း ပိုင်ဆိုင်မှုခိုင်မာတဲ့ မြေကျယ်အရောင်း
Ad Number S-8433928
Ad Number S-8433839
ကမ္ဘာအေးလမ်းမ ကြီး ဂုတ်ခြံ မြေကွက် နေရာကောင်း ရောင်းမည်.
7,300 Lakh (Kyats)
Ad Number S-8433226